ပင်လယ်ကွေ့ဧရိယာထဲမှာအလုပ်သမားတွေအတွက်ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာဂျော့ဘ်
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at အောက်တိုဘာလ 16, 2017
ဂျော့ဘ် in ဒူဘိုင်း WhatsApp ကို Group က, အခုဆိုရင် Expatriate တွေအလုပ်ရဖို့ကူညီနေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ နေရာ မင်းရဲ့အိပ်မက်အလုပ်မှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထံမှအလုပ်လျှောက်လွှာများကိုလက်ခံရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နေပါသည်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ WhatsApp အုပ်စုများကိုဒူဘိုင်းအလုပ်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ အသစ်သောကိုယ်ရေးရာဇဝင်များကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာမှပြည်ပသို့ထွက်ခွာသွားသူများအားအလုပ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းအုပ်စုများနှင့်ပူးပေါင်းရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
အတူတူပွင့်လင်းထူးခြားစုဆောင်းမှုမိတ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းနှင့်အတူ WhatsApp ကိုအုပျစု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများနှင့် ယူအေအီး။ ဒူဘိုင်းရှိအလုပ်များ Dubai Dubai Vacancies ကိုမျှဝေရန်နှင့်လဲလှယ်ရန်အတွက်အလုပ်ခေါ်ယူခြင်းနှင့်အလုပ်ရှာဖွေနေသူများကိုဖော်ပြခြင်းမပြုရ။ ယူအေအီးရှိအလုပ်များနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်မည်သို့အလုပ်ရနိုင်မည်နည်း။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Dubai's Jobs အတွက် Whatsapp Group တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖွင့်ပေးသည်။
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ WhatsApp Group ရှိအလုပ်များသို့
သငျသညျအစဉျအမွဲစုဆောင်းမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက် WhatsApp ကိုအသုံးပြုခဲ့ဖူး ?. နေ့တိုင်း ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းပြည်တော်ပြန်။ အမြတ်အစွန်းအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေ။ အသစ်သောနိုင်ငံများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်အကွာအဝေးသို့ရောက်ရှိ။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, သင်အလုပ်ရှာဖွေသူလျှင်။ နှင့်ရှာဖွေဖို့ရှာဖွေနေ ပိုမိုမြင့်မားသောလစာကြေးခွံဒူဘိုင်းမှာအလုပ်မလုပ်။ ငါတို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ မိုဘိုင်းဖုန်း WhatsApp ကိုစုဆောင်းမှုအုပ်စုများ။ လက်ကိုင်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းတွေဟာသင်ဖြစ်ရင်ပြီးပြည့်စုံတယ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေတာ tool ကိုများအတွက်သုတေသနပြု။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ရုံထက်ပိုသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်ရှာဖွေစုဆောင်းရတဲ့ကိုချစ်ပြီးအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပါ။
ဤအကြောင်းကြောင့်, ပြည်တော်ပြန်၏ 90 ကျော်% ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူန်ဆောင်မှုကိုတက်ယူကြပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းနေထိုင်ရဖို့ကူညီပေးနေကြပါသည်။ အလုပ်ရှာဖွေရေးရှာကြံအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်အမှာစာကိုလက်ခံရရှိ ဒူဘိုင်းအလုပ်။ အာရှအတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော WhatsApp ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးအတူ။ အပြုသဘောဘက်တွင်ကျနော်တို့အစဉ်အမြဲမျှော်လင့်နေကြသည် ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏နေရာချထားမှုစနစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကျိန်းသေသာ WhatsApp ကိုအုပ်စုများနှင့်အတူတက်ပြီးအောင်မရ gulf အလုပ်အကိုင်များများအတွက် နှင့်မိုဘိုင်းစုဆောင်းမှု။
ကျနော်တို့ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာဂျော့ဘ်များအတွက်ကူညီပေးနေကြပါသည်
ကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်အကိုင်အ WhatsApp ကိုအပေါ်ရှာဖွေနေ
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့လည်းကူညီပေးနေ ဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ပါကစ္စတန်ကနေပြည်တော်ပြန် နှင့်အများဆုံးဖွံ့ဖြိုးပြီးစီးပွားရေးနိုင်ငံများ။ ဥပမာအားဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် အလုပ်ရှာပါ in ဆော်ဒီအာရေဗျ တစ် ဦး ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ကာတာတွင်သင်၏အလုပ်အကူအညီအတွက်လည်းစီမံခန့်ခွဲသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ် ဦး ကိုဖန်တီးကတည်းက အလုပ်အကိုင်အပင်လယ်ကွေ့ကုမ္ပဏီများရှာဖွေနေ။ အတော်များများကအလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါပြီ ဒူဘိုင်း။ ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းသည်။ အများဆုံး အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများဒူဘိုင်းမှရွေ့လျား လူနေမှုတစ်ခုတိုးတက်လာသောစံသည်။ သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် ဒူဘိုင်း အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူတစ် ဦး နာမည်ကျော်မြို့ဖြစ်ပါတယ် အင်ဒီးယန်းများအတွက်.
သင့်ထံမှများမှာဘယ်မှာဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာဂျော့ဘ်. သင့်ရဲ့မေးမြန်းချက်များအတွက်အဖြေဖြစ်ပါတယ်။
ဂျော့ဘ်များအတွက်ပင်လယ်ကွေ့ Whatsapp Group မှ join
ငါတို့လည်းအခုရှိနေပြီ စုဆောင်းရေး တစ်ခုလုံး gulf အလုပ်အကိုင်များ နေရာလွတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကျိန်းသေလုပ်နိုင်ပါတယ် သင် GCC အတွက်အလုပ်အကိုင်အဆည်းပူးကူညီ။ သူတို့ရဲ့ဒူဘိုင်း Whatsapp Group မှအရေအတွက်ကိုဝေမျှသူကိုထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ Whatsapp ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအဘို့ဤအချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုပေးထားသင့်ရဲ့နံပါတ်များကိုမျှဝေကျေးဇူးပြုပြီး ဒူဘိုင်းအတွက် Uber အလုပ်အကိုင်များကို join ဖို့။ အနှစ်ချုပ်မှဦးလည်းအောက်ကမှတ်ချက်ဖို့သင့်နံပါတ်များကို drop နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အဖွဲ့ကအလုပ်တစ်ခုရဖို့သင့်ကိုကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သစ်တစ်ခုအလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းစကားပြော။ သေချာများအတွက်ကုမ္ပဏီများကငှားရမ်းအကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မသငျ့သညျ။ အဆိုပါ ဒူဘိုင်းအတွက် Careerjet အလုပ်ရှာဖွေအင်ဂျင် နှင့် website ကိုရှာဖွေ Monster ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
Whatsapp အုပ်စုသည်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ဒူဘိုင်းစီးပွားရေး။ အဖြစ်ဝေးစုဆောင်းမှုအဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကြီးထွားလာနေသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီမျှော်လင့်နေပါတယ် တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပေးရန်။ အထူးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်အဘို့အအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပေးထားပါတယ်။ သင်ကယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်။ ဒါ့အပြင် သငျသညျကာတာနိုင်ငံများအတွက်စုဆောင်းနိုင်ပါသည် နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။ ကျွန်တော်တို့၏ Whatsapp Group မှယောဘကိုရှာဖွေနေသူ။
လက်ရှိတွင် Are ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်စဉ်းစားလျက်ရှိ။ အလယျပိုငျးနှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများအတွက်။ စီမံခန့်ခွဲမှု, အိုင်တီ, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အကိုင်များ။ သို့သော်ငြားလည်း, ကျနော်တို့ # No.1 ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်များမှာ Whatsapp Group မှ။ ကြင်နာစွာ, သင့်အီးမေးလ်ကိုအောက်တွင်ကို update နှင့်ဤအသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအဖွဲ့ကသင့်ရဲ့ဆန်ခါတင်စာရင်းနိုင်ပါလိမ့်မည် အလောင်းအလျား အသေးစိတ်ကို။ ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာဂျော့ဘ်များမှာ ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်အကောင်းဆုံး.
ဒူဘိုင်းအတွက် Whatsapp Group မှဂျော့ဘ်ကို Join
သူတို့အခွအေနမြေိုး, WhatsApp ကိုဆက်သွယ်ပါ လကုန်တွင်ဒူဘိုင်းအုပ်စု။ အနှေးနဲ့အမြန်၊ ကျနော်တို့နေရာချတိုင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်း သူတို့သည်ငါတို့သုံးနေလျှင် Whatsapp Group မှဂျော့ဘ်။ အမှန်ဆိုသည်ကား, ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာမှန်ကန်သောလမ်းအတွက်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်သို့မဟုတ်ပင်ဒုတိယအတွေးပေါ်တွင်သင်, ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင် browse နိုင်ပါတယ် ဒူဘိုင်း 2018 အတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာပါ နှင့်ပျော်ရွှင်ပြည်ပရှိဖြစ်လာသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်စိတ်ဝင်စားဖို့အလုပ်အဖွင့်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်များအပြည့်အဝစာရင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုဖက်ရန်သင့် CV ကိုထည့်ပါ။
အဆိုပါ Find အလုပ်စတင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ. စော်ဘွား လုံလောက်သောကံကံဖြစ်ကြသည်။ ပြီးတော့ ငါတို့သည်သင်တို့ကြိုဆိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ် ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များဘို့ငါတို့ Whatsapp အုပ်စုအားလုံး။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကို Group မှလွယ်ကူသောမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့သင်တို့အဘို့ယခုစီမံခန့်ခွဲ။ အပြုသဘောဘက်ပေါ်မှာငါတို့ LinkedIn ပရိုဖိုင်းမှာကြည့်ရှိသည်။
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် WhatsApp ကိုအုပ်စု - ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်တစ်ခုရှာရန်ကြိုးစားပါ။
ဤဆောင်းပါးတွင်မှနိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ ယခုကြှနျုပျတို့ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရရှိနိုင်ပါအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်းကြသည်!။ ရှာဖွေခြင်းaဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုများအပေါ်။ ငါတို့ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းမှာသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးသင်ရွေးချယ်စရာများစွာနှင့်အတူတက်ကိုလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကအလုပ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook အုပ်စုများသို့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုက Linkedin ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏နောက်လိုက်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ကိုစံပြုအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ထို့အပြင်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတ ဦး တည်းမှကြွလာ။ ဘို့ ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များကိုအခှငျ့အရေး၌သင်တို့ကိုအားမရ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာများပေါ်တွင်သင်ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အသစ်ကအတူကံကောင်းပါစေ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများ.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ကူညီခြင်းအလုပ်ရှာဖွေသူများယူအေအီး၌ထားရမည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ ဒူဘိုင်းမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 500k အလုပ်ရှာဖွေသူများထက်များစွာ ပို၍ ကူညီပေးနေသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကယူအေအီးမှာအလုပ်တစ်ခုရခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp အုပ်စုများသည်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်များအတွက် created။ ကြည့်ဖူး ဘယ်လောက်သင်ယူအေအီးအတွက်ရရှိမည်. ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာဂျော့ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများအတွက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေရန်။ သင်တစ်ဦး bit နဲ့အလုပ်မလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအရာအရပ်ကိုစတင်ကြပါစို့ ဒူဘိုင်းမြို့အတွင်းအလုပ်ရရန်ဘယ်လို?။ ဘယ်လိုအလုပ်ရှာမလဲ ဗီဇာသွားရောက်ကြည့်ရှု ဒူဘိုင်းတွင် ယူအေအီးမှာအလုပ်တစ်ခုစလုပ်ဖို့တောင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်သိထားရမယ့်အရာအားလုံး။ အများကြီးရှိပါတယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်သူကိုသင့်လျော်သောလူရောက်ရှိဖို့။ ဒါဟာအမှန်တကယ်စီမံခန့်ခွဲဖို့ခက်တဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကိုလညျးအပေါ်တစ်ဦးကြည့်သင့်ပါတယ် တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အကောင်းဆုံး apps များ။ အောက်ပါနှစ်ပေါင်း၌၎င်း, အထူးသဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမိုဘိုင်းစုဆောင်းမှု စျေးကွက်ကြီးထွားလာသည်.
ဒူဘိုင်း၌ကောင်းသောအလုပ်ရှင်များကိုရှာဖွေရန်။ သငျသညျကိုဘယ်လိုယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်တကယ်ကောင်းသောစျေးကွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စတင်အချက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့်ကိုယ့်သငျသညျစော်ဘွားအတွက်ရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေကြသည်, f။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအခြားတစ်ဖက်တွင်လျင်မြန်စွာတစ်ဦးစုဆောင်းမှုအတိုင်ပင်ခံစျေးကွက်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုသူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေစတင်ပါ။
WhatsApp Jobs နှင့်ဒူဘိုင်းရှိနောက်ထပ်အချက်အလက်များပိုမိုရှာဖွေပါ။ Whatsapp အဖွဲ့အတွက်အလုပ်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖောက်သည်များသာမကကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ပါပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ထောက်ပံ့အကူအညီနှငျ့ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်များ။ သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေတဲ့အထူးသဖြင့်ပါ။
ယူအေအီး၌ထားခံရဖို့သငျသညျအသေးစိတ်လမ်းညွှန်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အောင်မြင်စွာနေရာချထားအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအဘယ်သူနည်း အဆိုပါ GCC နိုင်ငံအတွင်းရှိကအမြဲတမ်းအသစ်န်ထမ်းများအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ယာယီအလုပ်အကိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါအချို့ကိစ္စများတွင်ပင်အပြည့်အဝအချိန်သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်ရာထူးတွေ့ရှိရန်မဖြစ်နိုင်နဲ့တူပုံရသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့နှင့်အဘူဒါဘီကျော်အတွက် 70 အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာနေသစ်ကိုကျွမ်းကျင်သူများ၏ 2020%။ အသစ်နှင့်အခြေချနိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများဖြစ်ကြသည်။ ကြည့်ဖူး ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အယောဘသည်အခွင့်အလမ်းများ။ သင်ပင် WhatsApp ကိုအပေါ်ညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေစတင်ခင်မှာ။
ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ WhatsApp ကိုအုပျစုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအများအပြားနေရာကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်။ သူတို့ရဲ့ website ကအရမ်းတစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အသုံးဝင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစင်တာ အသေးစိတ်နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်များအတွက်လျှောက်ထား အလုပ်ရှာဖွေရေး ခွင့်ပြုသော tools များ ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးကျဉ်းမြောင်းမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, တည်နေရာ, အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်လစာ။ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်ခန့်ထားသည့်အလုပ်နေရာများစွာလည်းရှိသည်။ ဥပမာ, အိန္ဒိယ ပြောင်းရွှေ့ချင်ပါတယ်တဲ့သူအလုပျသမား ဤအအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များမှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်အခြားအဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပျစုမြားစစ်ဆေးပါ။
ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာဂျော့အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ရှာဖွေခြင်း။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းခဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာဂြိုလ်ပေါ်မှာလူသိရာအရပျ။ ကမ္ဘာ၏ဤအရပျကနေကုမ္ပဏီများ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ခွက်တဆယ်ဝယ်ယူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းငှားရမ်း။ ဘယ်လိုဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အအေဂျင်စီများကိုရှာဖွေ ?. အဖြစ်မှန်မှာတော့ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရအနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ရုံအိန္ဒိယအဘို့အဘယ်သူမျှမကအထူးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီရှိပါသည်။ သင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်ရှိရာအနည်းငယ်စံ Web Portal ရှိပါတယ်။
သင် ... သင့်တယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အကိုယ်ရေးရာဇဝင် Upload လုပ်ပါ။ ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပမှာအဆိုပါအလုပျလူတိုင်းအတွက်အိပ်မက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အမုဆိုးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေနှင့်ကြိုးစားနေ ဒီအံ့သြဖွယ်ရာအရပျထဲမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေ။ ဒူဘိုင်းတွင်အေဂျင်စီများကိုရှာဖွေရန်သင်လိုအပ်သည် Google က က။ အကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုကြည့်ပါ Forbes မဂ္ဂဇင်းအပေါ်အဆင့်စုဆောင်းကုမ္ပဏီများ။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ထားတဲ့လွယ်ကူသောလမ်းမရှိပါ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ပြည်တော်ပြန်များအတွက်ထောက်ပံ့န်ဆောင်မှု ကာတာနိုင်ငံရှိဒိုဟာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်စုဆောင်းသူများရှာဖွေလိုသူများအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်အလုပ်ရှာပါ စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ။ သင်တို့အဘို့ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အများကြီးတန်ဖိုးဖြစ်သင့်သည်။ သင်တန်းအာဏာပိုင်များစုဆောင်း, သာ Top-rated ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေနေ.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တွေ့နိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ LinkedIn ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အချိန်ကြာပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် GCC နိုင်ငံများတွင်အလုပ်အကိုင် နေပါစေသင်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်ဘယ်လောက်ခက်ခဲအချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပေးအပ် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေလျက်ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းရှိကျွမ်းကျင်သူများကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အကူအညီ လည်းအွန်လိုင်းအကြံပေး။ ကျနော်တို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးပုံမှန်အလုပ်သတိပေးချက်များလက်ခံရရှိရန်ခွင့်ပြုဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်၎င်းတို့၏ရွေးချယ်ထားသည့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်စရာမှာကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်သည်ကိုထိုအခါသတိရရမည်ဖြစ်သည်။
လူပုဂၢဳိလ္မ်ား ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျား အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်အတွက်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာငွေရှာရတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ယူအေအီးသို့ပြောင်းရန်မျှော်လင့်နေပါက။ မပြုမီ ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားအလုပ်တစ်ခုရဖို့ 10 ခြေလှမ်းများကိုဖတ်ရှု။ အလုပ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အများကြီးခရီးသွားလာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပါကစ္စတန်နှင့်အိန္ဒိယကနေလူတွေစကားပြော။ အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရယူခြင်း စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကနေလတ်ဆတ်တဲ့။
သင်ယူအေအီးမှပြောင်းရွှေ့စဉ်းစားခြင်းမပြုမီ။ သငျသညျကျိန်းသေတဲ့ကုမ္ပဏီကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဘယ်သူသည် ပြည်တော်ပြန်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများပေး။ ရေရှည်မှာ, ဒီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာ၏တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေခြင်းဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ယခုမူကားကျနော်တို့ဒူဘိုင်းထဲတွင်နေရာခံရဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးကူညီနေတာပါ။ အမြိုးသမီးတလည်းစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းရဲ့။ အတွင်းမန်နေဂျာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင် တစ်ဦးကုန်စည်ပြပွဲနဲ့တူထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများသည် 2020.
ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာနိုင်ငံခြားရေးဂျော့သင်တို့အဘို့အပွင့်လင်းသည်။
သငျသညျ MBA ဘွဲ့ပညာရေးရှိပါကဒူဘိုင်းမှာတော့သင်ဟာအလုပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုမန်နေဂျာရှာဖွေနေ ပညာတတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်။ အလုပ်အကိုင်များအဆင့်များအားလုံးအပေါ်အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံရရှိကောင်းသောပညာရေးနှင့်အတူလူ။ ရယူခြင်း ယူအေအီးအတွက်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများသည်ကနေအလုပ်အကိုင်အ။ သငျသညျပိုကောင်းအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများရကူညီပေးနေ။ နိုင်ငံခြားရေးအလုပ်နေရာလွတ်ကိုတကယ်လုပ်နေကြတယ် အလယ်တန်းနှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအမှုဆောင်အရာရှိမှအငယ်တန်းများအတွက်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများအလုပ်အကိုင်များ၏ကျယ်ပြန့်ကဏ္ဍချထားပါသည်။ မှတက်စစ်ဆင်ရေးလယ်ကွင်းထဲကနေ ဒူဘိုင်းအတွက်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနေရာလွတ်.
ဒူဘိုင်းအတွက်ဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောတက္ကသိုလ်နှင့်ဒူဘိုင်းရှိသူတို့ကုမ္ပဏီတွေကိုဆက်စပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယူအေအီးအတွက်အရည်အသွေးမြင့်နေရာလွတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ စံကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အပြုသဘောဘက်တွင် ဆရာမအဖြစ်တက္ကသိုလ်အလုပ်အကိုင် ကအလွန်အမင်းယူအေအီးအတွက်ဂုဏ်ပြုသည်။ ပညာရေးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုရှာဖွေခြင်းအမြဲအချိန်ကြာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုပညာရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဲဒါကိုကြိုးစားရန်ကယ့်ကိုထိုက်သည်။ ဒီစကားလုံးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသိပါ။
အဆိုပါအတွေ့အကြုံရစုဆောင်းမှုအတိုင်ပင်ခံအများစုဟာအလုံအလောက်ဖော်ရွေမရှိကြပေ။ ဥပမာ, သငျသညျတောင်အာဖရိကကနေဒူဘိုင်းမှအလုပ်ရှာဖွေလျှင်။ သင်သည်သင်၏လက်ရှိကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းဤအချက်များစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ရေးပေးတော်မူ၏။ ကျိန်းသေသငျသညျအဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှကူညီပေးပါမည်။ အချိန်တိုင်း သငျသညျသစ်တစ်ခုအခွင့်အလမ်းရှာဖွေနေစဉ်။ အသစ်ငှားရမ်း မန်နေဂျာ အသေးစိတ်အတွက်သင့်အားမေးမြန်းလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်မှာထားရှိပါ။
အချိန်တိုင်း သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှပြောင်းရွှေ့ဖို့အကြောင်းပြချက်ရှာနေကြသည်။ သင်သည်သင်၏စိတ်ကို refresh နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာစျေးကွက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူတက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့အဘို့ကိုဆိုလိုတာ။ ယူအေအီးအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရှာနေစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းလူတစ်ဦးအနေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုရဖို့ကြိုးစားနေသည် ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံခြားအလုပ်နေရာလွတ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့။ အဖြစ်မကြာမီသငျသညျခထြားပါလိမ့်မည်အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ သငျသညျအာရဗီအိပ်မက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ feeling စတင်မည်.
သင်အချိန်ဖို့အချိန်ကနေဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့ပြီးကတည်းက သငျသညျအင်တာဗျူးတွင်လမ်းလျှောက်ရှာတှေ့နိုငျ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဤမျှလောက်များစွာသော။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကြောင်းတည်ထောင်ထားတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုစကားပြော။ ဒူဘိုင်းအလိုတော်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဘဝ ကျိန်းသေသင်ဖြစ်သင့်တဲ့သူဖြစ်ကကူညီ။ ရှာဖွေသူလူအပေါင်းတို့သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်သင့်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကတက်ဆောက်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အလုပ်သစ်အဖြစ်သငျသညျ။ ဒေသခံအလုပ်ဈေးကွက်တစ်ခု In-depth အသိပညာသင့်တယ်ရယူခြင်း အခွင့်အလမ်းကိုသင်တွေ့ပါကကူညီ။ အကြောင်းပိုမို Read ကျွမ်းကျင်မှုသင့်ရဲ့တိကျတဲ့ကဏ္ဍ အလုပ်အကိုင်အလယ်ကွင်းအမျိုးမျိုး၌တည်၏။
သငျသညျမကြာသေးမီကမှရှာဖွေနေခြင်းရှိမရှိ ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာ၌သင်တို့၏အသက်တာသစ်ကိုရှာဖွေ သို့မဟုတ်သင်ပြီးသားသင့်လက်ရှိအလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အိပ်မက်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေ။ သငျသညျ Bayt နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဂျက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာကြည့်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေတာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများတောင်းဆိုလွန်းချမ်းအေးဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပင်တိုက်ရိုက်အလုပ်ရှင်များဆက်သွယ်ခြင်း စော်ဘွားအတွက်.
ဒါ့အပြင်သငျသညျစတငျနိုငျ ယူအေအီးအတွက်ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခြေခံက start အဖြစ်။ ဥပမာတစ်ခုမီးဖိုချောင်န်ထမ်းများအတွက် ဒူဘိုင်း။ ဒါဟာသင်စတင်နိုင်သည်ကိုအခြေခံနေရာလွတ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကြောင်း၏အချို့သင်အရေးတကြီးရနိုင်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါကြီးကြပ်ရေးမှူးအချို့, သင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကိုအပေါ်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အအုပ်စုများ။ သငျသညျဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရှိနိုင်ပါသည်ဤသည်နေ့ရက်သည်ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်များ။ တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီမန်နေဂျာယူအေအီးအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ကဖေးနှင့်စားသောက်ဆိုင်များအတွက် employ လက်စွဲစာအုပ်လုပ်သားများလိုအပ်လျှင်, ဥပမာ။ သင့်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရား အခြေခံအလုပ်အကိုင်အများအတွက် အမိန့်မချပါဝင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်စားဖိုမှူးတစ်ဦးကူညီပေးနေလက်ဖြစ်ရှာဖွေနေကြသည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျအိုင်တီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတှေ့နိုငျဥပမာ, တစ်ဦး ဒူဘိုင်းအတွက် Google ကအလုပ် ရှေးခယျြစရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဤအလုပ်နှင့်အတူ, သင်ကျိန်းသေတဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ဒီအမျိုးအစားသစ်ကိုလျှောက်ထားဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိတွင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းနေထိုင်နေကြသောသူတို့အဘို့သာ။ အဆိုပါ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများသည်နိုင်ငံခြားသို့အလုပ်လုပ် အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေသူကြိုဆိုနေကြသည်။ သငျသညျအလုံအလောက်အတွေ့အကြုံရှိသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင့်အိမ်တိုင်းပြည်အတွက်အချို့ရရှိရန်ကြိုးစားပါ။
Porshe သို့မဟုတ် Ferrari ပြိုင်ကားမော်တော်ကားအလုပ်အကိုင်များအတွက်အလုပ်လုပ်
တော်တော်များများလူတိုင်း Porshe သို့မဟုတ် Ferrari ပြိုင်ကားများအတွက်အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်။ ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင် ကြီးမားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူစော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ Find နှင့်မော်တော် & Automotive အလုပ်အကိုင်များများအတွက်အွန်လိုင်း apply အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ မော်တော်ကားလုပ်ငန်းအလုပ်ရယူခြင်းအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကိုလည်းအတွေ့အကြုံကိုလိုအပ်ပါတယ်. အဆိုပါ GCC နိုင်ငံများတွင်ဒါပထမဦးဆုံး get အတွေ့အကြုံကို။ ထိုအခါကြိုးစားကြ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေ.
ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာဂျော့ဘ်များအတွက်၏ CV ကို Upload လုပ်ပါ.
အဆိုပါ WhatsApp ကိုအပေါ်မိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှု
WhatsApp ကိုအလုပ်အုပ်စုများယခုရှာဖွေစုဆောင်း၏သတင်းရင်းမြစ်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ယူအေအီးအလုပ်အကိုင်များအသစ် WhatsApp ကိုအုပျစုမြားကိုကျွန်ုပ်တို့၏ငှားရမ်းအဖွဲ့။ ကျနော်တို့ပြီးသားအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအတွက် 300 အလုပ်ရှာဖွေသူများထက်ပိုရှိသည်။ တွင် 2018 နှင့် 2019 မိုဘိုင်းစုဆောင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူဿုံကသုံးနိုင်သည်။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများစုနေတဲ့စုဆောင်းမှုရလဒ်ကိုနှင့်အတူပျော်ရွှင်ကြသည်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ဤ WhatsApp ကိုအုပျစုမြား၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ။ ၏အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေဖလှယ်ဖို့အဓိကအား Is အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်တွေ့ရှိချက်.
ငါတို့သည်လည်းအနည်းငယ်အဖွင့်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း Philipino ကလူ သူကိုအလုပ်ရှာကြ၏။ ဤအချက်များအားပေး, ငါတို့ရှိသမျှသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးသကဲ့သို့သင်တို့ပါကစ္စတန်နှင့်အိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်ဘို့ငါတို့ WhatsApp ကိုအလုပ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူသင်၏နံပါတ်မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ရှင်းမှ, တိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှာဖွေနေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုများ join လို့ရပါတယ်။ ထိုသို့ထိပ်ဆုံးတွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုတစုအပိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုသွားနိုင်ပါတယ်ထိုရန်သင့်နံပါတ်များကို drop ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏စုဆောင်းမှုကိုယ်စားလှယ်။
GCC များအတွက် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ
WhatsApp ကိုအဖွဲ့များမတ်နဲ့ရိုးရိုးအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်ကြသည်။ ရလဒ်အဖြစ်ကျနော်တို့အလုပ်ရှင်များကိုကူညီသူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ်ထမ်းခေါ်ယူမှုပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်အလုပ်အဖွင့်ဝေမျှ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လတ်ဆတ်သော အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အနေဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ ကျိန်းသေအမျိုးသားရေးကိုရှာဖွေနိုင်ဖြစ်ကြပြီး ရေခြားမြေခြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီမှတက်အနည်းငယ်တောင်းဆိုမှုများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတောင်းဆိုမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်ကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အများအပြားဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုရှိခြင်းနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုများ GCC အပေါ်နှင့်အတူ။ သငျသညျအထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လို။ နောက်ခံတွင်, သာအိန္ဒိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများအဘို့မသာဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အနီးဆုံးအနာဂတ်အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက် WhatsApp ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေး၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။
2019 ငါတို့သည်တိုးချဲ့ပါလိမ့်မည် မြေတပြင်လုံးအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများ။ လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာအမေရိကန်နှင့်ကနေဒါကဲ့သို့အခြားနိုင်ငံသားများကူညီပေးနေ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်သူမည်သူမဆိုအဘို့အဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ငှားရမ်းက်ဘ်ဆိုက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်အတွက်တက်ကြွစွာအလုပ်ရှာဖွေသူ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျလျှင် အိန္ဒိယကနေယူအေအီးမှအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီဒီမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျအခြို့သောနေရာလွတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဘန်ဂလိုများတွင်အလုပ်အကိုင်ဘို့ငါတို့မိုဘိုင်းဖုန်း WhatsApp ကိုအုပ်စုတစုတွင်မျှဝေဖို့ ပြည်ပမှာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အိန္ဒိယကနေအခွင့်အလမ်းများ.
ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာဂျော့ - ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်အလုပ်အကိုင်အရယူပါ။
အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အ WhatsApp ကိုအုပျစု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအပေါငျးတို့သစစ်မှန်ရောက်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းများအတွက်ဘလော့ဂ်။ gulf အလုပ်အကိုင်များဘို့ငါတို့ WhatsApp ကိုအုပ်စုတစုအောက်တွင်အတိုင်ပင်ခံနှင့်တိုက်ရိုက်ကုမ္ပဏီများသည်ကိုရှာဖွေရန်လတ်ဆတ်တဲ့လူအင်အားလုပ်သားအင်အားကိုကူညီပေးခြင်း။ ကျနော်တို့စုဆောင်းမန်နေဂျာမျှော်လင့်နေကြသည်။ အဘယ်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ရက်အတွင်း၌သူတို့၏နေရာလွတ်ကိုမျှဝေချင်ပါတယ် ?. အဲဒီမှာကိုယ့်အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီ s ကိုအဘယ်သူမျှမလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခု ထိုကဲ့သို့သော WhatsApp ကိုအဖွဲ့များအဖြစ်လူမှုမီဒီယာများက၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအများဆုံးလက်လှမ်းမမီရဖို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မကြာခဏတင်ထားသည့်စုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှုဆောင်များအားကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်။ အခြား ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုအသစ်နေရာလွတ်ရှာဖွေစူးစမ်းနှင့်ပို့စ်တင်။ ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုလိုမဟုတ်ဘူး။ အပြုသဘောဘက်တွင်ကျနော်တို့တာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါအတောအတွင်းအတွက်, သငျသညျ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများကကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အတောင်းဆိုမှုကိုမျှဝေနေဖြင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုများထိပ်ဆုံး rated နေကြတယ် GCC အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွဲဝေမှုများအတွက်.
အပြင်ဒူဘိုင်းအတွက်အခြားမည်သည့်အလုပ်ပေါ်တယ်မှ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ သူတို့အလတ်ဆတ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းပေး။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိကျမတို့အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အနေဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ဝန်ဆောင်မှု clients များလုပ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့သြစတြေးလျ, မလေးရှားအတွက်လျော့နည်းလူကြိုက်များကြသည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ငါတို့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ဆောင်နေ.
များအတွက်နိဂုံး ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာဂျော့ဘ်
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်တွင်ကျေးဇူးပြုပြီး sယုန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါး အခြားသူများကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိကူညီနိုင်ရန် LinkedIn ပေါ်မှာ။ ကျနော်တို့ကအမြဲလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောဧည့်သည်များပျော်ရွှင်ကြသည်။ အကြှနျုပျတို့အားလက်ပေးခြင်းနှင့် Facebook သို့မဟုတ် LinkedIn ပေါ်မှာငါတို့အကြောင်းအရာမျှဝေခြင်း။ ဤအချက်များအားအခြားသူများကိုသင်ကူညီနေတာပါ။ နှင့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းထမ်းခေါ်ယူမှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အပေါ် rs LinkedIn တို့။
၏အခွင့်အလမ်းကအမြဲတမ်းရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းကိုရှာတွေ့။ ငါတို့သည်အခွင့်အလမ်းများရှိစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ကိုသိဘယ်တော့မှ !. ဒီတော့အဖြစ်အများကြီးသင်တတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါး share ပေးပါ။ အခြားသူများကိုကူညီပေးနေသူမည်သူမဆိုကောင်းမွန်သည်လို့ပဲ။ အဘယ်သူသည်အနာဂတ်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတယ်။ တဖန်သင်တို့လိမ့်မည် စော်ဘွားတစ်အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့.
ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာဂျော့ဘ်ကိုရှာပါ
ကောင်းပြီ, ငါတို့ကောင်းသောပေးနေကြသည်အဖြစ် လမ်းပြ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသင်အခုလမ်းညွှန်များရှာဖွေနေစတင်နိုင်ပါသည်, အကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။